Ungavuma kanjani ngeMakethe Ebucayi Bama-Indian
I-India yamukelwa ukuba yi-Amplegement ekhula ngokushesha kakhulu e-Apple ngonyaka olandelayo. Embonini ye-aegis ezungezile yonke, lokhu kuveza i-oppo engenhla ye-oppo ...
I-India yamukelwa ukuba yi-Amplegement ekhula ngokushesha kakhulu e-Apple ngonyaka olandelayo. Embonini ye-Aegis ezungeze yonke, lokhu kufaka ithuba elingenhla, emuva emuva eChina kuyaqhubeka nokubukeka kwezimpawu ze-slowdown.
Kepha ukungena e-Indian Bazaar kulula ukusho kunokukwenza. Ukushintshwa ngokuphelele kunoma iyiphi imakethe ethuthukisiwe noma evukile, i-India ibeka izinselelo eziningana zabahlinzeki bokutholwa.
Okokuqala okubalulekile okushiwo ngokuvamile kulokhu ukunakwa kuyizimfanelo ezizwela ngamanani womthengi. Yize abahlaziyi bebamba ukuguquka ekuqhubekeni okuqhubekayo, lesi sici samalahle ekwabiwe kwendlela ohlela ngayo amabhizinisi eNdiya.
Ukuzwela kwamanani kuvame ukuveza abakhiqizi abengeziwe engxenyeni ehlukile, ebe yodwa ukwabiwa kwengane yemakethe. Ukufakelwa ngokuphelele amanga ama-Alfresco Lawa makhasimende aphezulu, kepha ukuthi athenge ezinkampanini amukela ukubamba ukuthi ukukhishwa kwemizwa kwentengo kuyasebenza kanjani.
PHAMBI Umbono we-LS uzizwe uyaziqhenya ngokuthi 'kwenziwa eChina'
Ubuchwepheshe Bokuqashelwa Kwezinhliziyo Zekhamera nobuchwepheshe obukhulu bedatha OLANDELAYO